Akụkọ Bible: Site Mgbe A Kpọlitere Jizọs n’Ọnwụ Ruo Mgbe A Tụrụ Pọl Mkpọrọ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
N’ụbọchị nke atọ ka Jizọs nwụsịrị, e mere ka o si n’ọnwụ bilie. N’ụbọchị ahụ, ọ pụtara ugboro ise n’ihu ụmụazụ ya. Jizọs nọgidere na-apụta n’ihu ha ruo ụbọchị iri anọ. Mgbe e mesịrị, ka ndị na-eso ụzọ ya nọ na-ele anya, Jizọs rigooro n’eluigwe. Ụbọchị iri ka nke a gasịrị, Chineke wụsara mmụọ nsọ n’ahụ́ ụmụazụ Jizọs ndị nọ na-echere n’ime Jeruselem.
Ka e mesịrị, ndị iro Chineke tụbara ndịozi ahụ n’ụlọ mkpọrọ, ma otu mmụọ ozi napụtara ha. Ndị mmegide ji nkume tụgbuo Stivin onye na-eso ụzọ Jizọs. Ma anyị ga-amụ ụzọ Jizọs si họpụta otu n’ime ndị mmegide ahụ ịbụ ohu ya pụrụ iche, o wee ghọọ Pọl onyeozi. Afọ atọ na ọkara mgbe ọnwụ Jizọs gasịrị, Chineke zigara Pita onyeozi izi Kọniliọs nke na-abụghị onye Juu na ezinụlọ ya ozi ọma.
Ihe dị ka afọ iri na atọ mgbe nke ahụ gasịrị, Pọl malitere njem ozi ọma mbụ ya. Na njem nke abụọ ya, Timoti sonyeere Pọl. Anyị ga-amụ ụzọ Pọl na ndị so ya mee njem si nwee ọtụtụ oge obi ụtọ n’ozi Chineke. N’ikpeazụ, a tụrụ Pọl mkpọrọ na Rom. A tọhapụrụ ya mgbe afọ abụọ gasịrị, ma a tụrụ ya mkpọrọ ọzọ wee gbuo ya. Ihe omume ndị a kọrọ ná NKEBI NKE 7 mere n’ime ihe karịrị afọ iri atọ na abụọ.